ESI GBANYỤỌ FIREWALL NA WINDOWS 8 - WINDOWS - 2019
Gbanyụọ firewall na Windows 8
A na-ejikarị ihe odide ala mee ihe na akwụkwọ eletrik maka nghọta doro anya banyere ihe ọmụma ahụ. O zuru ezu iji gosipụta ọnụ ọgụgụ dị mkpa na njedebe nke ahịrịokwu ahịrị, wee webata nkọwa ezi uche dị na ala nke ibe - ma ederede ga-aghọ ihe kwere nghọta.
Ka anyị gbalịa ịchọta otú e si etinye ihe odide ala ala ma si otú a hazie akwụkwọ ahụ na otu n'ime editọ ederede free editor OpenOffice.
Bido nbudata OpenOffice ohuru ohuru
Na-agbakwunye onye edemede edemede OpenOffice ihe odide ala ala peeji
Mepee akwụkwọ nke ịchọrọ ịgbakwunye ihe odide ala ala.
Debe cursor n'ebe ahụ (njedebe nke okwu ma ọ bụ ahịrịokwu) mgbe ịchọrọ itinye ihe odide ala ala
Na menu ihe omume, pịa Fanyewee họrọ ihe ahụ site na listi ahụ Ihe odide ala ala
Dabere na ebe ihe odide ala ga-adị, họrọ ụdị ihe odide ala ala (Ihe odide ala ma ọ bụ n'okpuru)
Ị nwekwara ike ịhọrọ otú ọnụọgụ ntọala kwesịrị ịdị. Na ọnọdụ Na akpaghị aka A ga-agụta ọnụ ọgụgụ dị elu site n'usoro nọmba, na Ihe ngosi nọmba ọ bụla, akwụkwọ ozi ma ọ bụ akara nke onye ọrụ ahụ họọrọ
O kwesiri iburu n'uche na otu njikọ a nwere ike zite site na ebe di iche iche na akwukwo. Iji mee nke a, megharia cursor na ọnọdụ achọrọ, họrọ Fanyena mgbe ahụ Akwukwo nso. N'ọhịa Ụdị ubi họrọ Ihe odide ala wee pịa njikọ ahụ achọrọ
N'ihi omume dị otú ahụ na OpenOffice Writer, ị nwere ike ịtinye ederede ma dozie akwụkwọ ahụ.